VACC70000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၇၀၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- VACC 70000
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VACC70000
VACC70000 70000LPH Purified water filtration system is the best water filtration system applying the RO membrane system and is chosen byalot of water processing manufacturers.
VACC70000 70000LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်စနစ်က RO အလွှာပါးစနစ်ကို အသုံးပြုထားတဲ့ အကောင်းဆုံး ရေစစ်ဖြစ်ပြီး စက်ရုံအများစုက ရွေးချယ်ကြပါတယ်။
Nowadays, the demands for purified bottled water are quickly increasing as pure water is an important factor to keep us healthy. This has openedalot of opportunities for manufacturers in the water processing industry. However, there areanumber of suppliers who supply fake filtration products with bad quality, causing dramatic damages to the water processing manufacturers.
ယနေ့ခေတ်မှာ ရေသန့်ဘူးတွေကို အသုံးပြုတာ များလာတဲ့အတွက် ရေသန့်က ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်အရေးပါလာပါတယ်။ ဒီအချက်က ရေသန့်လုပ်ငန်းအတွက် အခွင့်အလမ်းပဲ ဖြစ်တယ်။ သို့သော်လည်း ရေသန့်စက်ရုံတွေကို အရည်အသွေးနိမ့် ရေစစ်ထုတ်ပစ္စည်းတွေကို ပေးပို့နေတဲ့သူတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။
For Viet An, with nearly 20 years of experience in providing water treatment processes, we have provided the customers with genuine products directly imported from the big countries in the world. We are always committed to genuine and high-quality products. For more details about this VACC70000 70000LPH Mechanical Composite valve bottled water filtration system, see the article below.
နှစ် ၂၀ နီးပါး ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာတွေကို ပေးပို့လာတဲ့ အတွေ့အကြုံအရ Viet An မှ ဝယ်ယူသူတွေကို ကမ္ဘာ့ ကြီးမားတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေက တင်သွင်းတဲ့ စစ်မှန်သော ပစ္စည်းတွေသာ ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေက စစ်မှန်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်ကြောင်း ကတိပေးပါတယ်။ VACC70000 70000 LPH ရေစစ်အကြောင်း ပိုမိုသိရှိဖို့ အောက်က ဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုပေးပါ။
VACC70000 70000LPH Purified water filtration system uses the Mechanical Composite valve produced according to American technology.
This product uses the RO membrane system - the most advanced filtration technology currently. This membrane system helps to remove up to 99% of the bacteria and produce pure water with the best quality, satisfying 6-1-2010/BYT standards set by the Ministry of Health.
It has stable performance, high durability, and less maintenance.
VACC70000 70000LPH ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာက အမေရိကန် နည်းပညာအတိုင်း ထုတ်လုပ်ထားသော စက်သုံး စုပေါင်းအဆို့ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒီစက်မှာ ခေတ်အမီဆုံး RO အလွှာပါးစနစ်ကိုလည်း အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒီအလွှာက ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကို ဖယ်ရှုားပေးပြီး ရေတွေကို သန့်စင်ပေးကာ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီစေပါတယ်။ ဒီစက်က လုပ်ဆောင်မှု တည်ငြိမ်တယ်။ ကြာရှည်အသုံးခံတယ်။ ထိန်းသိမ်းရမှု နည်းတယ်။
The composite material is made up of many different materials, so it has high mechanical strength and specific gravity. Using this material makes the device resistant to brackish water and salty water, specifically relevant to the Vietnamese climate. It is commonly chosen by the customers in the coastal areas.
Composite material makes it easy to clean and maintain the filter system.
စုပေါင်းပစ္စည်းကို မတူညီတဲ့ ပစ္စည်းမျိုးစုံနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး ထူးခြားတဲ့ ဆွဲအားရှိပါတယ်။ ဒီစက်က ရေချို ရေငန် ခုခံနိုင်စွမ်းရှိပြီး အထူးသဖြင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။ ဒီစက်ကို ကမ်းရိုးတမ်းဒေသမှ အများဆုံး ဝယ်ယူကြပါတယ်။
စုပေါင်း ပစ္စည်းက ရေစစ်ကို သန့်ရှင်းရ ထိန်းသိမ်းရ လွယ်ကူစေပါတယ်။
Why should use the VACC70000 70000LPH Purified water filtration system?
VACC70000 70000LPH ရေစစ်ကို ကျွန်တော်တို့ ဘာကြောင့် အသုံးပြုသင့်တာလဲ
Asamechanical valve system, this product is relatively cheaper than other products of the same category using automatic valves.
စက်သုံး အဆို့စနစ်ကြောင့် ဒီစက်က အခြား အော်တိုအဆို့တွေကို အသုံးပြုတဲ့ စက်ထက် ဈေးချိုပါတယ်။
Typically, the filtration capacity of these two types is the same. The only difference is that with the mechanical valve, there will be an operator required to adjust the3gate valve.
အမျိုးအစား နှစ်ခုလုံးရဲ့ စစ်ထုတ်နိုင်စွမ်းက တူညီပါတယ်။ ကွဲပြားတာက စက်သုံးအစို့နဲ့ဆိုရင် ၃ ဂိတ်အဆို့ကို ညှိဖို့ အော်ပရေတာတစ်ယောက် လိုအပ်ပါတယ်။
That is the reason why the product is widely chosen byalot of customers.
ဒါက ဒီစက်ကို ဝယ်ယူသူတွေ အများကြီး ရွေးချယ်ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The entire water filtration process is closed. The intake water will be pumped into the filter tanks through the membrane and bactericidal system and bacteria filter before it comes to the distribution tank for the filling process.
စစ်ထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးက သီးသန့်ဖြစ်ပါတယ်။ ရေကို လောင်းဖြည့်ရန် ဖြန့်ဝေခြင်းတိုင်ကီထဲသို့ မပို့ခင် ဘက်တီးရီးယား စစ်ထုတ်ကိရိယာနဲ့ အလွှာပါးကို ဖြတ်ပြီး စစ်ထုတ်တိုင်ကီထဲသို့ စုပ်တင်ပါမယ်။
For more information about our water filtration systems, click here https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc. For detailed information, call us at 0949414141
ရေစစ်တွေအကြောင်း ပိုမိုသိရှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်သလို ၀၉-၄၉၄၁၄၁၄၁ ကိုလည်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
1 Push pump with 304 Stainless steelhead စတိန်းလက်စ်စတီးခေါင်းပါသော တွန်းအားရေစုပ်စက်4pc Ebara/ Pentax-Italy
2 Air disinfection lamp လေပိုးသတ်ထားသောမီးအိမ် 60 pc VA/ USApec
3 Air disinfection lamp hanger လေပိုးသတ်ထားသောမီးအိမ်ထည့်ထားသည့်ရံ 60 pc VA/ USApec
4 Composite tank စုပေါင်းတိုင်ကီ4pc VA/ USApec
73gate valve ၃ ဂိတ်အဆို့4pc VA/ USApec
8 Composite tank စုပေါင်းတိုင်ကီ4pc VA/ USApec
93gate valve ၃ ဂိတ်အဆို့4pc VA/ USApec
11 Composite tank စုပေါင်းတိုင်ကီ4pc VA/ USApec
12 Auto valve အော်တိုအဆို့4pc VA/ USApec
14 40 Filter Cartridge ၄၀ စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့် 80 pc VA/ USApec
15 Industrial filter housing စက်ရုံသုံး စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ်4pc VA/ USApec
16 Multi-Stage Booster pump system အဆင့်များစွာပါသော အားပြင်းရေစုပ်စနစ်3pc Ebara/ Pentax-Italy
17 Membrane housing အလွှာပါးအိမ် 20 pc VA/ USApec
18 RO membrane RO အလွှာပါး 40 pc Hitech-USA/CSM Korea
19 Flowmeter စီးဆင်းသောမီတာ 8 pc Taiwan
20 Pressure gauge ဖိအားတိုင်းတာကိရိယာ 22 pc Taiwan
21 Oil pressure gauge ဆီဖိအားတိုင်းတာကိရိယာ4pc Taiwan
22 Copper solenoid valve ကြေးနီသံလိုက်အစို့4pc Cn Korea
23 Brine tank ပင်လယ်ရေတိုင်ကီ2pc VA/ USApec
24 Electrical system လျှပ်စစ်အားစနစ်2set LK Korea
25 UV lamp UV မီးအိမ် 20 pc Poland/ Hungary/ USA
26 Ozone machine အိုဇုမ်းစက် 20 pc VA/ USApec
27 Industrial filter housing စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ် 10 pc VA/ USApec
28 Bacterial filter Cartridge ဘက်တီးရီးယား စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့် 70 pc VA/ USApec
Hỏi đáp & đánh giá VACC 70000 70000LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်